के तपाईँलाई थाहा छ? फ्रान्स र बेल्जियमले आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल एकआपसमा खेलेका थिए :: PahiloPost
के तपाईँलाई थाहा छ? फ्रान्स र बेल्जियमले आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल एकआपसमा खेलेका थिए
10th July 2018, 09:51 pm | २६ असार २०७५
रसियामा भइरहेको २१औँ संस्करणको फिफा विश्वकप अन्तर्गत आजबाट सेमिफाइनल खेल हुँदैछ।
१२ वर्षपछि विश्वकपमा पहिलो पटक अल युरोपियन सेमिफाइनल हुँदैछ र पहिलो सेमिफाइनलमा आज राती ११:४५ बजे फ्रान्स र बेल्जियम सेन्टपिटर्सवर्ग स्टेडियममा फाइनल प्रवेशका लागि भिड्दैछन्। यस खेलको विजेताले उपाधिका लागि इंग्ल्याण्ड र क्रोएसियाबीचको विजेतासाग खेल्नेछ।
सेमिफाइनल पुग्ने मध्ये बेल्जियम सबैभन्दा माथिल्लो वरियता (तेस्रो) रहेको टोली हो भने फ्रान्स सातौँ वरीयतामा छ।
सन् १९९८ को विश्वकप विजेता फ्रान्स र पहिलो पटक फाइनल पुग्ने लक्ष्य राखेको बेल्जियमबीच खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने पक्का छ। किनकि दुवै टोली प्रतियोगितामा अपराजित छ भने दुवै टोलीको अट्याकिङ उत्कृष्ट छ।
एन्टोलनी ग्रीजमन र किलिएन एमबाप्पेले फ्रान्सको अट्याक सम्हाल्नेछन् भने बेल्जियमको अट्याकमा कप्तान हाजार्ड, डे ब्रुएना र लुकाकु हुनेछन्।
फ्रान्स र बेल्जियमबीचको हेड टु हेडमा अनौठो संयोग पनि छ। यी दुई टोली अहिलेसम्म ७३ पटक एकआपसमा भिडेका छन्। फ्रान्सले कुनै पनि विपक्षीसँग खेलेको यो सबैभन्दा धेरै खेल हो। यस्तै विश्वकपमा दुई पटक भेट हुँदा दुवैमा फ्रान्स विजयी भएको छ। समग्रमा भने बेल्जियमले ३० खेल जित्दा फ्रान्सले २४ खेल जितेको छ।
विश्वकपमा फ्रान्समाथि पहिलो पटक जित हात पार्दै पहिलो पटक फाइनल पुग्ने दाउमा छ।
सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको यी दुई टोलीले आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल एकआपसमा खेलेका थिए। सन् १९०४ मा भएको उक्त खेल ३-३ गोलको बराबरीमा सकिएको थियो।
इभेन्ट कोपी ट्रफी अन्तर्गत १ मे १९०४ उक्त खेल बेल्जियमको उस्लीमा भएको थियो। खेलमा बेल्जियमका लागि क्वेरिटेटले २ तथा डेस्ट्रेबेकले १ गोल गरेका थिए। यस्तै फ्रान्सका लागि मेस्निएर, रोएट रसाइप्रेसले १-१ गोल गरेका थिए।
युरोपका दुई स्वतन्त्र राष्ट्रबीच यो पहिलो खेल थियो भने समग्रमा युरोपियन राष्ट्रबीच खेलिएको तेस्रो खेल थियो।
के तपाईँलाई थाहा छ? फ्रान्स र बेल्जियमले आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल एकआपसमा खेलेका थिए को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।